Moa ve izany rehetra maimaim-poana?
Nahoana aho no tokony hisoratra anarana?
Ahoana no ahafahako mianatra tsy misy dokam-barotra?
Ahoana no ahafahako manampy ny tetikasa?
Adiny firy no tokony hatao mba hianatra hikasika-karazana?
Ahoana no mandrefy ny mpanondro teny isa-minitra (wpm)?
Inona no zavatra tokony hampiasa TypingStudy.com?
Rehefa manomboka ny lesona, ny fandaharana fa tsy maintsy hanohy Shift + taratasy. Fa nahoana izany?
Iza moa izany fa?
No mety ho dyslexic olona?
1) Raha hisoratra anarana, dia manana vaovao fandrosoana miaraka amin'ny tantara.
2) Afaka mianatra tsy misy dokam-barotra (taorian'ny fanomezana kely)
Taorian'ny fanomezana kely dia hanaisotra dokam-barotra avy amin'ny tantara. Hanam-paharetana, satria izany no dingana boky ity.
1) Soraty fanehoan-kevitra mikasika ny zavatra tianao sy tsy tiany
2) Soraty momba ny hevitrao, ny fomba hanatsarana ny fianarana
3) Ilazao ny namanao momba antsika (hizara ny tranonkala ao amin'ny tambajotra sosialy, hiaraka aminay https://www.facebook.com/TouchTypingStudy)
Ny fotoana nila nianatra hikasika-mitendry tsara dia miankina amin'ny toetra manokana. Zava-dehibe koa ny mampihatra tsy tapaka. Izany no soso-kevitra ianao vokatra izahay mba haka lesona 1 isan'andro.
Tadidio, fantatrao izay ny taratasy rehetra dia tsy midika hoe vonona ianao ny mitendry mafy. Ny rantsan-tananareo tokony hanana fomba na ny hetsika antsoina hoe 'hetsiky ny hozatra fahatsiarovana' ny toerana manan-danja manokana ny tsirairay no misy, nefa tsy nieritreritra ny fanalahidy, na mijery ny Keyboard. Automatic hetsika dia be ihany no mandroso amin'ny alalan'ny famerimberenana. Tadidio - mahatonga tonga lafatra ihany no fomba fanao!
Handrefesany WPM, ny fandaharana zava-dehibe ny teny maro no voasoratra isa-minitra. 1 teny = 5 litera, ao anatin'izany ny toerana sy ny mari-tsoratra.
Avy amin'ny lafiny ara-teknika ihany no ilainareo ny fifandraisana Internet. Na izany aza, dia mety koa ny antony manosika sy ny fahavononana mila mba hanatsara ny fahaiza-manao mikasika any vao soratany.
Azafady, ho azo antoka fa tsy Caps Lock amin'ny rehefa manomboka any vao soratany. Raha ny Caps Lock no teo, ny fandaharana mangataka ny hanohy ny hoe manan-danja + niara-manilika.
Fianarana nitendry dia ho an'ny olona rehetra, izay te mba hampitombo ny na ny mikasika ny fahaiza-manao any vao soratany. Touch any vao soratany dia ny fahaiza-manao izay manome fahafahana ny olona iray nitendry milina fanoratana, fa tsy mijery ny Keyboard mba hahitana ny marina fanalahidy.
Eny, nitendry ny Fianarana no mety ihany koa ho an'ny olona amin'ny dyslexia. Miaraka amin'ny fahaiza-manao any vao soratany mikasika ireo olona manana tombontsoa miavaka amin'ny faritra maro toy izay tsy manana ny fahaiza-manao mikasika any vao soratany. Toy ny sasany dia manana olana ny olona dyslexic tamin'ny fanoratana amin'ny tanana, na avy amin'ny hafainganam-pandeha sy ny readability fomba fijery, ny asa tendrena dia mora kokoa noho izany.